'पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन्' - कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा - Kantipath.com
‘पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन्’ – कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा प्रस्ताव गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
ज्यान मुद्दामा किटानी परेका सापकोटालाई सभामुखमा प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेमा १० वर्षअघि अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन् :
‘दल या सरकारको नेतृत्वभन्दा संसदको नेतृत्व फरक गरिमा, शालीनता र सन्तुलनको संस्कारगत छविसमेत अनुभूति हुनुपर्ने जिम्मेवारी हो,” उनले ट्विटमा भनेका छन्, “सत्य निरुपणको टेबुलमा थियो त अलग कुरा अन्यथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के उन्मुक्ति दिने अधिकार राख्ने थलो हुन् राजनीतिक दल या संसद ?’
शर्माले राजनीतिमा अनेक पात्र र प्रवृत्ति हुने गरेको बताउँदै भनेका छन् :
‘राजनीतिमा अनेक पात्र र प्रवृत्ति हुन्छन् । कुन पदमा कस्तो प्रवृत्ति ? छनोट उचित भएन भने त्यो पदको गरिमा त धरापमा पर्छ नै राजनीतिप्रति नै थप वितृष्णा बढ्छ । श्री पशुपतिनाथले बहुमतधारी नेकपालाई सद्बुद्धि प्रदान गरुन् ! जय नेपाल !’
Previous Previous post: गलिन शिबमाया, संसद बैठक अगावै राजीनामा दिने तयारी
Next Next post: दुई कुख्यात सुदखोर विरुद्ध ३३ उजुरी दर्ता !
विश्व ज्येष्ठ नागरिक, विश्व बसोवास दिवस
आलोचनाको डरले स्थायी कमिटी बैठक सारिरहने ओलीले मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सक्लान् ?
गोही, गौरीगाई र अजिङ्गरले मानिसलाई आक्रमण गरे अब राहत पाइने